Malunga Nathi - iBeijing Sincoheren S&T Development Co., Ltd.
Thina, iBeijing Sincoheren S&T Development co., Ltd, esekwe ngo-1999, i-ofisi eyintloko ebekwe eBeijing, eChina, okwangoku sineofisi eJamani, eMelika naseOstreliya, ngumenzi we-hi-tech ochwephesha wezixhobo zonyango kunye nobuhle, onobutyebi. amava kwishishini lobuhle.
Sinesebe lethu loPhando kunye noPhuhliso, umzi-mveliso, amasebe okuthengisa amazwe ngamazwe, kunye neziko lenkonzo yaphesheya, ukubonelela ngexabiso lethu lonke labathengi baseTshayina kodwa basekhaya emva kwenkonzo.
Ukusukela ekusekweni kwayo kwiminyaka engama-21 eyadlulayo, iSincoheren ibibambelele kumgaqo othi "umthengi kuqala, inkonzo kuqala", ukubonelela abathengi bethu kwihlabathi liphela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo eziphezulu, ukubonelela ngoqeqesho lwasimahla kuye wonke umthengi, kwaye wonke umatshini uya kuthi. unenkonzo yasimahla emva kokuthengisa kunye nokugcinwa, sinethemba lokuba wonke umthengi uya kuba ngumxhasi wemveliso yethu emva kwentsebenziswano yokuqala nathi.
Enkosi ngentembeko yakho kwaye ukhethe ukusebenzisana nathi, sinethemba lokuba singenza kunye ishishini lokuphumelela lobuhle.
Okwangoku, sinemizi-mveliso emibini, enye iseBeijing, eTshayina, enye iseShenzhen, eTshayina.Zonke iimveliso ziveliswa ngokuhambelana nemigangatho engqongqo yezixhobo zobuhle.Bonke abasebenzi baya kunikwa uqeqesho olujikelezayo phambi kokuba baqale ukusebenza.
Zonke iimveliso ziyahlangabezana nenkqubo yomgangatho kunye nemigangatho, zonke iimveliso zinezatifikethi ze-CE, kwaye ezinye zazo zifumene izatifikethi ze-US FDA.
1. sonke isixhobo sethu siya kubonelela ngekhosi yoqeqesho lwasimahla kunye nezatifikethi zoqeqesho lwasimahla.
2. umxhasi uya kufumana incwadi yoqeqesho kunye nevidiyo yoqeqesho
3. Ikhosi yoqeqesho kwi-intanethi,ugqirha woqeqesho lobuchwephesha lweklinikhi uya kunika iinkcukacha malunga nokusebenza kwesixhobo
4. Uqeqesho lwasekhaya ngomnyango nomnyango luya kubonelelwa ngumqeqeshi wethu wasekuhlaleni, okanye ngabasebenzi bethu baphesheya kweelwandle.
Iwaranti kunye nasemva kweNkonzo
1. Zonke izixhobo zethu zibonelela ngewaranti yeminyaka emi-2 yasimahla kunye noLondolozo lwasimahla, imarike nganye iya kuba neenjineli ezikhethekileyo kwisixhobo ngasinye.
2. yasekhaya emva kwenkonzo iya kubonelelwa eJamani nase-USA.